Geerida madaxweynaha Burundi ma ka faa’iideysan kartaa Rwanda? – Radio Damal
Geerida madaxweynaha Burundi ma ka faa’iideysan kartaa Rwanda?
“Sida uu dastuurka Burundi uu qabo haddii madaxweynuhu uu dhinto asaga oo weli xafiiska haya waxaa markiiba xilka qabanaya guddoomiyaha baarlamaanka”
“Waxaan ka warqabnaa in madaxa sirdoonka uu yahay nin adag oo ka hortagay isku dayadii afgembii ee hore walow Tanzania ay aad uga caawisay, uuna ahaa ninkii adkaa ee badbaadiyay Nkurunziza, laakiin sida aan hadda aragno hannaanka socda ilaa waxaa laga hadlay qaabka tacsida iyo in dalka baroordiiq la geliyo 7 cisho kaddibna guddoomiyaha baarlamaanka la wareegi doono xilka,” ayuu yiri Bursaliid.
“Haddii aan nahay shacabka Burundi amniga ayaan mudnaanta koowaad siineynaa, waxaan raaceynaa halka ay dowladda inoo hogaamiso. Waxaan kasoo gudubnay dooorasho waxaana ognahay in madaxweynaha xiga ee dalka uu xaadir yahay,” ayuu yiri.
“Iyadoo kol hore isku day afgembi uu dhacay cabsidiina ay weli taagan tahay, xiriirka Burundi iyo Rwanda aanu aad u ficneyn, ilaa iyo haddana aanan la garaneyn waxa dhinaca kale nooga imaan kara, oo ah ka faa’ideysi iyo wixii lamid ah iyo in xaaskiisa ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay dalka Kenya lagu daweynayay.”
“Waxaa suuragal ah inay la xanuunsan tahay fayraska oo isagu laftiisa uu horay u inkiray dalkana ka eryay wakiilladii Ha’yadda Caafimaadka Adduunka” ayuu yiri Dr Ibraahim Faarax Bursaliid.
Burundi waxaa sannadkii 2015-tii ka dhacay doorasho muran badan dhalisay kaddib markii mudaharaadyo rabshado wata ya ka dhaceen caasimadda, kuwaasoo looga soo hor jeeday go’aankii uu Mr Nkurunziza mar saddexaad ugu soo istaagay xilka, wuxuu dalka noqday mid ka go’doonsan gobolka.
“Burundi iyo madaxda cusub waxaa la gudboon inay gooni isu taagga siyaasadeed ay galeen ay ka baxaan, inay dib ugu soo biiraan urur goboleedka loo yaqaano Bariga Afrika ee dhaqaalaha iyo in sida haddaba ciidammo nabad ilaalin uga joogaan Muqdisho dhexdhexaad uga yihiin colaadda sokeeye ee Soomaalida iyo nabadeynteedaba ay kaalintoodi gobolka iyo tan beesha caalamka dhexdhexaad uga noqdaan.”